Kufanele Uyisuse Nini Amabhuleki E-trailer? - IShanghai KTG Auto Technology Co., Ltd.
Kufanele Uyisuse Nini Amabhuleki E-trailer?
Alikho iphuzu elilodwa, elichazayo lapho kufanele ufake khona amabhuleki amasha kwi-trailer yakho.
Esikhundleni salokho, abakhiqizi bemishini nababhuleki ngokufanayo basikisela ukulandela umkhondo wokuguquguqukayo okuthile ukusiza ukwazisa ngesimo esijwayelekile samabhuleki akho. Lezi zinto eziguqukayo, njengesisindo se-trailer yakho, imvamisa yokudonsa, amabanga ohanjiwe, indawo yokudonsa kanye nesitayela sokushayela konke kuzothinta amashejuli wokushintsha amabhuleki.
Kodwa-ke, kunezinyathelo ezimbalwa okufanele uzicabangele lapho ugcina ikhwalithi nobuqotho bamabhuleki e-trailer yakho - kanye nezincomo ezisuka kumanyuwali wakho wamabhuleki - nokuqinisekisa ukuphepha kwe-tow yakho.
1. Ngamamayela angama-200 wamabhuleki ahlelwe ngesandla
Kunconywa ukuthi ama-trailer amasha sha, asanda kuthengiswa abone amabhuleki awo ehlolwe futhi alungiswa eduze kwamamayela angama-200.
Cishe ngamamayela angama-200 yisikhathi lapho izicathulo zamabhuleki nezigubhu, okuyizinto ezimbili ezimaphakathi komhlangano wangaphakathi wamabhuleki, zizobe “zihleli” phansi. Izicathulo nezigubhu ezihleli kahle zihlangana ne-electromagnet yesistimu ye-braking system kanye ne-core brake controller. Ngokubambisana, lezi zingcezu ekugcineni zibangela ukungqubuzana okumisa i-trailer yakho njalo lapho ucindezela phansi kubhuleki esihlalweni somshayeli.
Ngaphandle kwezicathulo ezihleli kahle nezigubhu, inqubo yokubamba amabhuleki izohamba kancane, ingasebenzi kahle noma - isimo esibi kakhulu - futhi ibe yingozi.
Ngemuva kokuhlolwa kwamabhuleki wamamayela angama-200, amabhuleki e-trailer angahle abuyekezwe cishe kanye ngonyaka, ngesikhathi sokuhlolwa kwamalayisense minyaka yonke noma ngokuvama kwemvamisa yokudonsa inqola yakho.
2. Ngamamayela ayi-12,000
Ngaphezu kokuhlolwa kwesistimu yamabhuleki minyaka yonke, ama-wheel bearings kufanele agcotshwe cishe njalo ngamamayela ayi-12,000. Kumakharavili okuhamba asindayo asindayo kanye nama-RV ezinamasondo amahlanu abona amamayela amaningi emgwaqeni, lawo mashejuli angaba kaningi kakhulu.
Qaphela, noma kunjalo, ukuthi ukugcoba noma "ukupakisha" amabhere akufani nokufaka amanye amabhele. Kodwa-ke, lezi zinqubo ezimbili ezifanayo ngoba ukufinyelela amabheringi angaphakathi nangaphandle kuzodinga izinyathelo ezifanayo nokuqedwa kokufakwa kwamabhuleki amasha.
3. Lapho Incwajana Yakho Incoma
Hlola izincomo zamabhuleki ezishiwo kumanuwali yomnikazi we-trailer yakho noma eyenziwe ngumkhiqizi wakho we-axle. Leyo manyuwali kufanele futhi ichaze imiyalo ejwayelekile, yezinyathelo nezinyathelo zokuthi ungazifaka kanjani futhi uzishintshe izingxenye ezithile zebhuleki lemodeli yakho, ulungise izihlalo zezicathulo futhi upake kahle amabhere akho.
4. Lapho Ukusebenza Kwamabhuleki Ngokuvamile Kuhlupheka
Sebenzisa ukuqonda lapho kukhulunywa ngokugcina nokufaka amabhuleki akho e-trailer esikhundleni. Uma uqaphela amabhere anamasondo anomsindo, ama-lags amabhuleki angajwayelekile noma umehluko ekucindezelweni kwe-braking, sekuyisikhathi sokuhlola izingxenye. Uma ukulungisa izicathulo zebhuleki kungakusiki, kungenzeka ukuthi kungenxa yokufakwa esikhundleni kohlelo.